Hababka Loo Yareyn Karo Miisaanka, Qalinkii Deeqa Cali Saalax - Daryeel Magazine
Hababka Loo Yareyn Karo Miisaanka, Qalinkii Deeqa Cali Saalax
Miisaanka Badan , Qof kasta oo isku daya in uu yareeyo miisaanka waxa ay ka qaadataa dadaal badan iyo hawlkarnimo dheeraad ah. Nasiib-wanaag, way ka fududahay, sida aad ka fikirayso.
Haddii aad gubto calories badan marka loo barbar-dhigo ta aad ka hesho cuntadda, culaysku wuu kaa dhacayaa. Taas macnaheedu waxa weeyi karta , tamarta badan ee jidhka ku kaydsan haddii aan la gubin waxa ay isku bedeshaa Dux ama Baruur, taas oo sabab u ah culayska badan.
Sidaas daraadeed; waxa haboon in uu qofku yareeyo xadiga calories-ka ah ee uu qaadanayo ama uu kordhiyo dhaqdhaqaaqa jidhka, sida jimicsiga, orodka iwm. Halkan waxa aynu ku xusi doonaa tallaabooyin kooban oo lagu yarayn karo miisaanka:
1. Cabitaanka Shaaha Cagaaran (Green Tea): haddii aanad joojin karayn cabitaanka shaaha, waxa bedel aad ka dhigan kartaa shaaha cagaaran. Shaahani waxa uu gubaa maalintii 70 calories ah, sababta oo ah waxa uu dedejiyaa dheef-shiidka.
2. Midhaha Khudaarta: khudaarta cagaaran oo sideeda loo cunaa waxa ay ka wanaagsan tahay, iyada oo la miiro, sababta oo ah galkii ayay leedahay (fiber), kaas oo fududeeya dheef-shiidka. Tusaale, Liinta inta aan la miiran waxa ku jira 60 tamar ah, halka marka la miiro ay isku bedesho 120 tamar ah.
3. Biyaha ka door-bid sharaabka kale: Biyaha ayaa ka wanaagsan sharaabka, dhinaca miisaan-yaraynta, laakiin haddii aanad joojin karayn cabitaanka sharaabka, isticmaal ka soodhaha leh, sida Sprite-ka iwm.
4. Kordhi Qaadashada Borotiinka: Borotiinka badan waxa uu yareeyaa duxda/baruurta. Sidaas daraadeed; cunitaanka kalluunka ama beedka ayaa ka wanaagsan cunitaanka hilibka, kuruska iyo baruurta, marka laga hadlayo miisaan yaraynta.
5. Yaraynta Macmacaanka Cuntada Laga Dambaysiiyo, gaar ahaan kuwa chocolate-ka iyo dufanka leh.
6. Cuntada oo Saliida laga Yareeyo: Ka yaree saliida, badharka, subagga cunta. Saliidaha ugu wanaagsan waxa ka mid ah Saytuunka.
7. Yaree Cuntada Aad Qaadanayso: Uma baahnid in aad cunto badan isticmasho saddex wakhti, sababta oo ah waxa mashquuliya hab-dhiska dheef-shiidka, waxa kugu filan in aad 4 ilaa 5 jeer aad cunto cunto dheeli-tiran oo aad u yar.
8. Jooji Cuntooyinka loo yaqaan (Starchy food): sida Baradhada, ku bedel beeniska, faasuuliyaha, heedda, hadhuudhka, Galayda, Sareenka oo dhammaantood laga helo fiber, vitamin, iyo Iron.
9. Cuntada Guriga: Cuntada guriga ayaa ka wanaagsan ta suuqa, sababta oo ah waad kaantaroolaysaa cunta gurigaaga lagu samaynayo.
10. Akhri waraaqda ku dhegan cuntada aad cunayso: si aad u hubiso xadiga tamarta ah ee laga helo ama taariikhda ay dhacayso iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Waa Qallinkii Deeqa Cali Saalax
Cudurka Dyslexia Oo Qofka Ku Adkeeya Wax-akhriska Astaamaha Lagu Garto Hababka Loo Dabiibi Karo Sababaha Keena Cidhiidhiga Neefsiga Iyo Qaababka Ugu Habboon Ee Loo Daweyn Karo Hababka Loo Kordhiyo Awoodda Maskaxda Faa’iidada Xambaarka Caruurta Iyo Hababka Ugu Habboon Ee Loo Xambaaro